चीनले भन्यो – अर्को महिनासम्म कोरोना भाइरसको खोप तयार हुन्छ ! – Life Nepali
चीनले भन्यो – अर्को महिनासम्म कोरोना भाइरसको खोप तयार हुन्छ !
काठमाडौं। कोरोना भा इरसबाट अतिप्रभावित चीनले अप्रिलमा नोभेल कोरोना भा’इरस (कोभिड १९)वि’रुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अर्को महिना केही खोप उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ । चीनले यस्तो खो पको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको विज्ञान तथा प्रविधि विकास केन्द्रका निर्देशक झेङ झोङवेईका अनुसार खोपका लागि भाइरसको पाँच पक्षलाई आधार, बनाइएको छ । जयसमा स्थिर रुपमा सुधार आइरहेको बताइएको छ ।
अझै पनि अनुसन्धानको क्रममा थप कठिनाइ आ’उन सक्ने’ उनले बताएका छन् । आफू र आफ्नो टिमले भाइरसबाट सिक्ने क्रम जारी, रहेको उनले बताए । साउथ चाइना मर्निङ पो’ष्टका अनुसार केन्द्रीय सरकारी अधिकारीले आगामी महिनाबाट केही खोप, परीक्षणका लागि अनुमति दिने बताएका छन् । डिङ सियाङयाङ, नामका, ती अधिकारीले हुवेई प्रान्तमा कोरोना, भाइरसको विषयमा अध्ययन गर्दै, आएका छन् । गएको, डिसेम्बरदेखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको, सं’क्रमणबाट शु’क्रबार(२३ फागुन) अपरान्हसम्म ३ हजार ४०८ जनाको ज्या’न गइसकेको छ ।
९३ देशमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण १ लाख १ सय ६२ जनामा देखिएको छ । जसमध्ये ५५ हजार ८ सय १२ जना उपचार पछि निको भएका छन् । यसरी महामारीको रुपमा लिएको कोरोना, भाइरस, वि’रुद्धको, खोपबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको, चीनले, अप्रिल महिना, आ’पतकालीन प्रयोगका लागि केही खोप उपलब्ध हुन सक्ने ,दाबी, गरेको हो । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको विज्ञान, तथा प्रविधि विकास केन्द्रका निर्देशक, झेङ झोङवेईले, खोपका लागि कोरोनाभाइरसको पाँच ओटा पक्षलाई, आधार, बनाइएर, अनुसन्धान, गरिरहेको ,भन्दै, आउँदो महिनाबाट, केही खोप परीक्षणका लागि अनुमति, दिइने जानकारी दिएको साउथ, चाइना मर्निङ पोष्टले, जनाएको छ ।
Previous ढुक्क हुनुहोस्, नेपालीको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गरेका छौं – चिनियाँ राट्रपति